Xog ku saabsan Weerarkii Guriga Cabdi Qaybiid iyo Halka Laga soo Abaabulay -
Xog ku saabsan Weerarkii Guriga Cabdi Qaybiid iyo Halka Laga soo Abaabulay
Weerarkii lagu qaaday hoyga Senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa waxaa la sheegay in loogudan lahaa in Senetorka lagu qaarajiyo sida aan Xogtan ku helnay.
Senetorka ayaa Subixii waxaa uu Aaday Garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdule Cusmaan Aadan Cade waxaa Garoonka ka soo degaysay Xaaskiisa Bahda weyn oo Xaalad Caafimaad ugu maqneed dalka Hindia.
Markii ay soo degtay Xaaskiisa ayaa Senetorka iyo xaaskiisaba Waxay soo Aadeen hoygiisa laakiin Nasiib wanaag waxay ku kala hareen Iskoyska Banaadir inta Aan lagaarin Guriga ka dib Markii Senetorka lagu war galiyay in Shaqo Deg-Deg ah laga rabo. Xaaska iyo Qaar ka mid ah Ciidanka ilaalada u ah Cabdi Qaybdiid ayaa Guriga Aaday Senetorka iyo qaar ka mid ah ilaaladiisana waxay Aadeen Shaqadii lagu war galiyay Senetorka.
Ciidanka Weeraray Guriga ayaa waxay la socdeen in Senetorka uu subixii ka baxay guriga uuna aaday Garoonka diyaaradaha ee muqdisho ka dibna uu ka soo baxay Asaga iyo xaaskiisanna ku wajahan yihiin Gurigooda.
Laakiin ma,aysan helin in Xildhibaanka uu shaqo Aaaday sidaas ayaana Guriga lagu weeraray oo waxay u haysteen in Guriga uu ku sugan yahay Cabdi qaybdiid.
Xildhibaan Cabdi Xasan cawaale Qaybdiid ayaa waxaa la sheegay in uu Mucaaradka uu ka diiday in ladumiyo Dowlada Ama lamucaarado ka dib Markii Xiriir ay la soo sameeyeen Rag uu ka mid yahay Cumar Cabdi Rashiid iyo qaar kamid ah Xildhibaanada ku jira Aqalka hoose in kastoo Aan helin Magacyada Xildhibaanadaas.
intaas ka dib waxay Mucaaradka isku dayeen in ay qaarijiyaan Cabdi qaybdiid si Beesha Habar Gidir iyo inta kale ee Beelaha soomaaliyeed ay isku Mabdayihiin Dowladda loogu kaco laakiin qadarta Alle Madhicin taas.
Ciidanka Weeraray Guriga Cabdi Qaybdiid ayaa waxaa la gasoo diray Xarunta Imaaraadka Carabta ay ku tabababaraan Ciidanka Soomaalida ee ku taala Degmada Hodan Gaar ahaan Cisbitaalka Xoogga.
Amarka ayaa waxaa Bixiyay Mid ka mid ah Saraakiisha Soomaalida ee ay Tababareen Imaaraadka oo Hadda Sargaalkaas uu ka mid yahay Ragga Xiran waxaana la sheegay in Falkaas dilka ladamacsanaa uu ku qaatay lacag farabadan ka dib markii ay la soo xiriireen siyaasiyiinta Soomaalida ah ee kuxiran Imaaraadka Carabta islamarkaana Ka soo horjeeda nidaamka Dowladnimo ee hadda ka jira Soomaaliya.
Siyaasiyiinta iyo Hogaamiyaasha Maamulada Ka jira Soomaaliya ee ku xiran Imaaraadka Carabta ayaa waxay ku dadaalayaan shir qool walba oo Dowladda Soomaaliya lagu mijaxaabin karo.
Sargalkan oo aan ku Howlan nahay magaciisa ayaa waxaa uu Amar siiyay ciidan Soomaaliya Qabiil kasta ka kooban si aan loo Dareemin,Haddii Falkaas uu dhici lahaa Waxaa Dowladda Soomaaliya Madaxdooda ku noqon lahayd Caqabad weyn oo ay xilka ku wayn lahaayeen Sababatoo ah Waxaaa dusha laga saari lahaa in Ciidanka dowladda ay ka dambeeyeen dilkaas Fashilmay.
Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid ayaa waxaa uu ka mid yahay Ragga Miisaanka Culus ku leh soomaaliya Dhexdeeda,Mar waxaa uu soo noqday Taliyihii ciidanka Booliska soomaaliya,Markale Waxaa uu ahaa Madaxweynihii Maamulka Galmudug,Waxaa kaloo Aan helnay in uu ka mid yahay Ragga fara ku tiriska ah ee beesha Habar Gadir ka soo jeeda ee Sida buuxda ula dhacsan Hanaanka Hay,adaha Dowladda ay wax ku wadaan,Waana Sababata loo Weeraray.
xogtan ayaa waxaan ka helnay Qaar ka mid ah Ehelada Senetor Cabdi Qaybdiid oo naga Codsaday in aan Magacyadooda Adeegsanin.
Imaaraadka Carabta ayaa waxay ku dadaalayaan Qaabkii loo Af gambin lahaa Dowladdan Kal soonida ka heshay Shacabka soomaliyeed iyadoo Madaxdan ay xoogga Saareen in ay kal sooni galiyaan ciidanka iyo ladagaalanka Musuq Maasuqa waana Tan keentay in Mucaaradka ay ka caroodaan in wanaag intaas la ek ay layimaadaan Farmaajo iyo Khayre.
Related Items:Featured, Xog ku saabsan Weerarkii Guriga Cabdi Qaybiid iyo Halka Laga soo Abaabulay
DEG-DEG-Kenya oo Shaacisay in ay Dileen Saraakiil Al-Shabaab ah
Saraakiil Al-shabaab ah oo isasoo dhiibay Daawo Sawirada